SAWIRO: Ina Carabeey oo guul ku tilmaamay boobka uu beesha CELI/MARREEXAAN u geystay. – Kismaayo24 News Agency
SAWIRO: Ina Carabeey oo guul ku tilmaamay boobka uu beesha CELI/MARREEXAAN u geystay.
by admin 11th December 2016 058
Maxamed Xaashi Carabay oo uu Abdkariim u keensaday inuu ugu adeegto Galmudug ahaan ayaa waxaa uu bilaabay tilaabadii ugu horeysay oo Marreexan isaga horkeenayo.
Isagoona si aan gabasho laheyn u sheegay in kursiga xildhibaanimo ee Celi sanadkan awood ku qaadanayo, islamarkaana ku tilmaamay kuwa aan mudneyd waqtigan.
Barta uu facebook ku leeyahay Ina Xaashi Carabay ayaa waxaa uu soo dhigay sawirada xubnaha kasoo jeeda waqooyiga Galgaduud, ee uu qaarkood sida sharcidarada ugu doortay Cadaado, isagoona si digasho ka muuqata qoraal u raaciyey.
“Hambalyo kooxda cusub, la shaqeeya dadkaan bey Galmudug idin soo saartee, idinka oo mahadsan”. Ayuu yiri, isaga oo sawirada uu soo qaatay ku jiro ninka uu u dhacay kursiga Celi. Taasi oo muujineysa inuu dabaaldeg u arko boobka uu ina Carabey kursigaasi ku sameeyey.
“Maxamed Xaashi ayaa waxaa ku jira cuqdad gaamurtay oo kala dhexeysa Beesha Celi shaqsiyaad ka dhashay, taasi oo isku baddeshay inuu reer dhan ula dagaalo shaqsiyaad. Waase mida uu ku jabi doono siyaasad ahaan iyo shaqsi ahaan” Ayuu yiri Nabadoon Ali Cili Nuur oo kasoo jeeda beesha Celi.
Waxaase maskaxda ka danbeysa ee ku hoggaamineysa fashilka uu dhexgalay ka mid ah Abdikariim Guuleed, kuwaasi cabsi ka qaba siyaasada furfuran ee Celi kala dhaxeysa maamulada Puntland iyo Ahlusuna, oo ay Madaxweyne kuxigeen ka yihiin.
Laakiin kursiga ay doorashada beenta ah u dhigteen ayaa noqon doonin mid u socda. Waxaana iminka lagu howlan yahay, sidii guddiga khilaafaadka iyo midka doorashada arrintaasi waxba kama jiraan ugu tilmaami lahaayeen.
Dhageyso: Doorashadii Aqalka Hoose ee Hirshabeele oo Maanta lagu soo gaba gabeeyay Kuraas Muran xoogan uu ka taaganyahay
Dhageyso+sawirro: Qaraxii ugu Qasaaraha Badnaay oo Saakay ka dhacay Meel u dhaw Dekedda Muqdisho Qasaaraha Dhimashada oo Kor u dhaafaya ku dhawaad…..
Mareykanku Miyuu taageeraya Doorashada Soomaliya ka dhaceysa Sanadkaan Mise ????
Tifaftiraha K24 2nd July 2016 2nd July 2016
Dhageyso: Deg-deg: Taliyaha Ciidamadda Xooga oo goor dhow ka baadbadey qarax la doonayey in lagu qaarajiyo oo ka dhacay……….